Adobe Capture 5.2 (1545) Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.2 (1545) လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Adobe Capture
Adobe Capture ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
MediaPost Appy ဆုဆုရှင် 2016!
Adobe က Capture အတစ်ဖန်ဆင်းခြင်းစက်သို့သင့်ရဲ့ Android ဖုန်း / Tablet ကိုပြန်သွားလေ၏။
ပုံစံများ, virus သယ်ဆောင်နှင့်ပင်ဖောင့်ကြည့်ဖို့သင့်ကင်မရာမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေနေဆိုပါစို့။ အခုတော့ဒီဇိုင်းပစ္စည်းများသို့ရှိသူများရူပါရုံလှည့်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့စီမံကိန်းများတည်ဆောက်ရန်ဖန်တီးမှုပိုင်ဆိုင်မှုသို့သင်တို့ပတ်လည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့ပါဝါကိုယ်လက်နှင့်စွန်ပလွံယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Go ကိုအပေါ် vector
အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အတူချက်ချင်း virus သယ်ဆောင်ဖန်တီးပါ။ အမှတ်တံဆိပ်များ, ပုံဥပမာ, ကာတွန်းနှင့်ထို့ထက် ပို. အတွက်အသုံးပြုရန်ချောမွေ့, အသေးစိတ်, အရွယ်မှာ virus သယ်ဆောင်သို့ရုပ်ပုံများကိုဖွင့်။ ပွိုင့်နှင့်သင့်ပုံဆွဲမှာရိုက်ကူးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကို upload ပြုလုပ်ဥသုံစင်ကြယ်သောကြည်လင်ပြတ်သားစွာလိုင်းများအသွင်ပြောင်းစောင့်နေကြလော့။
Adobe က Capture အသုံးပြီးသင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောစာလုံးကိုရှာပါ။ (! ဘယ်နေရာမှာမဆို, တစ်တံဆိပ်ပေါ်မှာတစ်မဂ္ဂဇင်းအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာကို) သင်ကြိုက်နှစ်သက်အမျိုးအစား၏ဓာတ်ပုံကို ယူ. ဥသုံပေါ်လာအလားတူကို Adobe Fonts များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။
အရောင် Themes နှင့် gradient Create
ဒီဇိုင်နာများ, ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ စိတ်ကြိုက်အရောင်ပန်းကန်တွေရှာဖွေနေပါသလား တစ်ဦးဖှယျ gradient ကိုရှာပါ? သငျသညျချင်သောအရောင်များရှိကြောင်းအခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသင့်ရဲ့ကင်မရာကိုရည်ရွယ်, သင်၏အနုပညာလက်ရာများအတွက်သုံးစွဲဖို့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့။
တင့်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ် Brush Build
ဖှယျပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ဖမ်းယူကြိုတင်ဂျီဩမေတြီနှင့်အတူပုံစံများ generate ။ အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုစီမံကိန်းများနှင့်အတူ fit ကြောင်းလှပသောပုံစံများဖန်တီးပါ။
3D texture Generate
ဖြောင့်ကင်မရာကနေ 3D ဒီဇိုင်းအတွက်အသုံးပြုရန်လက်တွေ့ကျကျ PBR ပစ္စည်းများ Generate ။ ပို. ပင် texture အဘို့သင့်ပစ္စည်းများပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်သင့် 3D အရာဝတ္ထုပေါ်တွင်ချောမွေ့စွာထပ် tile များအတွက်အနားရောနှောနေခြင်း။
ကြည့်ရှုနှင့်သင်၏ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်လှပသောအရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် profile များကိုသို့လှည့်အလင်းနှင့်က hue စုဆောင်းပါ။ သင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုအမြင်အာရုံစီမံကိန်းများတွင်သုံးစွဲဖို့ခံစားရမယ့်နေဝင်ချိန်များနှင့်အပြောင်းအရွှေ့၏ပဉ္စလက်ကိုအသံဖမ်း။
ချောမွေ့စွာ Sync ကိုကို Creative Element တွေကို
အားလုံးသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို Adobe Creative Cloud စာကြည့်တိုက်မှသိမ်းဆည်းပါ။ အားလုံးသဟဇာတ applications များ၌သင်တို့၏ Creative Cloud အကောင့်မှသင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် element တွေကို access ။
ကို Creative ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့ Adobe က Apps နှင့် Programs ကို
Photoshop ကို, ကို Photoshop Sketch, Premiere Pro ကို, Illustrator, Illustrator Draw, InDesign, Dimension, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်, Dreamweaver, Animation နှင့်မူဆယ်မြို့
အဆိုပါအခမဲ့, အခြေခံ Creative Cloud အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် file ကိုထပ်တူပြုခြင်းနှင့်ခွဲဝေမှုအဘို့အ complimentary သိုလှောင်မှု 2GB ပါဝင်သည်။
သုံးစွဲမှု Adobe ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Adobe ကသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
Adobe Capture အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Adobe Capture အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Adobe Capture အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Adobe Capture အား အခ်က္ျပပါ
jrz-store စတိုး 10 6.91k
Adobe Capture ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Adobe Capture အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.2 (1545)
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
ဗားရွင္း: 5.2 (1545)
လက်မှတ် SHA1: E2:61:45:6F:E8:78:FA:8E:EE:5E:F6:0E:86:5E:B5:05:E2:22:62:9F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Adobe
အဖွဲ့အစည်း (O): Adobe
နိုင်ငံ (C): en
Adobe Capture APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ